Esi belata mmetụta coronavirus na ụlọ ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Aplicaciones, Nkuzi
Coronavirus akpọnwụwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Europe, China na mba ndị ọzọ na ụwa ndị ọzọ maka ọnwa abụọ. Azụmahịa niile akwụsịla n'otu ntabi anya. Dị ka usoro dị iche iche meriri ịlaghachi na njedebe, azụmahịa na-emepe.
Dabere n'ụdị azụmahịa, anyị ga-agbaso usoro mgbochi dịka ịkpa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iji ihe nkpuchi, oke ikike ... ha nwere ike ịbụ ntu ke akpati ozu maka ọtụtụ ndị ọchụnta ego na ndị nweere onwe ha mgbe ha gachara ọrụ ọnwa abụọ
Ọtụtụ bụ ndị ọchụnta ego na ndị nweere onwe ha na-anwa ịchọta ụzọ iji nwee ike mee ka azụmahịa ahụ ghere oghe, na-anwa ida obere ego dị ka o kwere mee ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na-ekpuchi mmefu ruo mgbe ọnọdụ ga-aka mma na ọnwa ndị na-abịanụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ụzọ ụfọdụ ga - esi nyere gị aka imeri nsogbu ahụ coronavirus kpatara, a na m akpọ gị oku ka ị gaa n’ihu n’ịgụ ihe, ebe ọ bụ n’ezie, ị ga - achọta ọtụtụ echiche ndị na - agabeghị n’obi gị.
I nwere ike iche na nke a bụ otu ihe ederede karịa ị nwere ike ịchọta na ịntanetị nke ụdị a, mana ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na m bụkwa onye ọchụnta ego, ya mere, amaara m nke ọma ihe bụ nsogbu ndị na-emetụta anyị ugbu a na ndị ahụ na anyị nwere ihe ị ga-anwale chọọ ngwọta ozugbo enwere ike.
1 Comprehensive management ngwa
2 Kpakorita na ndi n’enye anyi ahia
3 Ọrụ site n'ụlọ
3.1 Hazie ọrụ
3.2 Nzukọ Virtual
3.3 Ime njikọ
4 Mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Comprehensive management ngwa
Taxtụ na ndụmọdụ gbasara ọrụ na-enye anyị ohere ijikwa ụgwọ ịkwụ ụgwọ, akwụkwọ ọnụahịa, ụtụ isi, nyocha ... n'ụzọ dị mfe na enweghị nchegbu. Mana, dabere na olu nke ụlọ ọrụ anyị na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ọ ga-abụ na kwa ọnwa, akwụkwọ ọnụahịa nke onye ndụmọdụ anyị bụ otu n’ime mmefu ndị anyị na-agaghị enwe ike iwepụ.
Tupu ọnọdụ a, nkwanye anyị bụ: jikwaa ụlọ ọrụ gị na igwe ojii. Ọ bụ usoro na-esiwanye ike na nke akụnụba, ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ ọrụ anyị lebara anya n'otu ebe na n’ọnọdụ dị ala nke ukwuu nke onye ndụmọdụ raara onwe ya nye nwere ike ịnọchite anya ya.
Kpakorita na ndi n’enye anyi ahia
Ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ na freelancers nke na-anwa ị nwetaghachị iwu ikwu mgbe ngabiga nke coronavirus. Otu akụkụ kachasị mkpa na ụlọ ọrụ metụtara ịkwụ ụgwọ. Tupu anyị echee echiche banyere iwelata mmefu, nke ga-emecha bụrụ ihe ga-emebi anyị, anyị kwesịrị ịnọdụ ala mkparịta ụka na ndị na-eweta anyị.
Dabere na ọnọdụ akụ na ụba nke coronavirus hapụrụ ndị na-eweta anyị, ọ ga-abụrịrị na ha ga-anabata gbuo oge na nbịakọta akwụkwọ ọnụahịa. Buru n'uche na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ndị ọrụ onwe ha na-ahọrọ ịkwụ ụgwọ, ọbụlagodi na ọ dị n'oge, karịa ịghara ịkwụ ụgwọ.
O doro anya, tupu ịnọdụ ala iji gbasaa ịkwụ ụgwọ, anyị ga-elebara anya ntụgharị nke ndị na-ere ahịa anyịdị ka anyị nwere ike ọ bụghị naanị ndị ahịa na-arịọ ka a yigharia.
Ọrụ site n'ụlọ
Imirikiti ọrụ ụlọ ọrụ na-adịghị arụ n'ihu ọha n'ihu ọha, enwere ike ime ya n'ụzọ zuru oke site n'ụlọ, ọ bụrụhaala na e guzobere usoro ọrụ na ma ndị ọrụ ma ndị ọrụ ga-ekwenye.
Workingrụ ọrụ n'ụlọ abụghị naanị na ọ na-ebelata ọfịs, na-enye ohere ka ọchụnta ego ahụ nwee obere ọfịs na si otú belata ego nke ọnwa mgbazinye. Ọ na-enyekwa onye were gị n’ọrụ ohere ịchekwa ego na ụgwọ ọrụ ma ọ bụ agbara ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ngwa iji gboo mkpa nke ụlọ ọrụ ọ bụla maka ndị ọrụ ya ka ha rụọ ọrụ nke ọma, enwere ụdị ngwa ọ bụla -ekwe ka ị na-arụ ọrụ remotely enweghị ihe ọ bụla kọrọ.
Ezubere ngwa ngwa ndị otu Microsoft iji nye ụlọ ọrụ ohere ka ha rụọ ọrụ nke ọma, ma na-eguzobe ọwa nkwukọrịta otu na nke ọ bụla na onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ.
Otu Microsoft, jikọtara a video ọkpụkpọ n'elu ikpo okwu nke ahụ na-enye anyị ohere ịme nzukọ nzukọ na-enweghị isi ịchọta onwe anyị ka ịtọlite ​​oghere n'ọfịs iji nwee ike ijide ha, ma ọ bụ nke oge ma ọ bụ nke otu.
Ọ na-arụ ọrụ aka na aka na To-Do, ngwa ọrụ Microsoft, nke na-enye anyị ohere ịhazi ọrụ na-echere onye ọrụ ọ bụla ma lelee ọnọdụ ha. O jikọtara ya na Office 365, na-enye ọtụtụ mmadụ ohere ịrụkọ ọrụ ọnụ n'otu akwụkwọ ahụ.
Ọ bụ ezie na Slack bụ ezigbo ihe ọzọDịka ọ naghị enye oku vidiyo yana ijikọ ya na onye njikwa ọrụ, ọ naghị eme ya ngwa a tụrụ aro, ebe ọ bụ na o kwere omume ọ bụ ajụjụ nke ijikọ ọrụ niile enwere ike n'otu ngwa ahụ.
N'ihe banyere ịkpọ oku vidiyo, ọnụọgụ nhọrọ dị oke obosara. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ iji Microsoft Otu, anyị nwere ike ịkpọ oku vidiyo site na otu ngwa, ya mere ọ dịghị mkpa ịbanye na ọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, nhọrọ nke Google Meet na Zoom nyere bụ mmụba na ọnụọgụ ọrụ yana ọnụọgụ nke ndị so na (100 n'otu oku vidiyo). Ngwa abụọ, dị ka Microsoft Teams, dịkwa maka ngwaọrụ mkpanaka.
Ọ bụrụ na anyị na-eji a usoro nlekọta ọrụ anyị, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịjụ onye nrụpụta ma ọ bụrụ na ngwa ahụ na-enye ohere nke nnweta dịpụrụ adịpụ, nke mere na iji otu kọmputa, ndị ọrụ niile nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ dị ka na mbụ.
Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, anyị nwere ike ime ka ojiji nke ime management ngwa, ngwa na ka anyị jikọọ n'ebe ọ bụla ma jiri kọmputa niile, ọ bụghị naanị ngwa njikwa arụnyere na kọmputa ahụ. TeamViewer bụ otu n'ime ngwọta zuru oke dị na ahịa, ebe ọ na-enyekwa anyị ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka.
Mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Ọ bụrụ n ’ịtụlepụta ụlọ ahịa dị na ntanetị nwere ike ịbụ ugbu a kacha mma. Na ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ọrụ dị iche iche na-enye anyị ohere ịmepụta ibe weebụ, jikwaa ịkwụ ụgwọ, ụzọ mbufe ... Dabere na azụmahịa anyị, ọ ga-enye anyị ohere ịgbasa ndị na-ege ntị nwere ike iru.
N'echiche a, ọ bụrụ na ibe Facebook nke ụlọ ọrụ anyị na-arụkarị ọrụ, anyị nwere ike iji ojiji Facebook ọhụrụ akpọrọ Lọ Ahịa Facebook, otu ikpo okwu na enyere obere ulo oru aka na ere ahia ha na Facebook na nke ahụ amalitela tupu oge mbụ site n'aka ụlọ ọrụ Mark Zuckerberg na ebumnuche nke inyere obere ụlọ ọrụ aka na oge ndị a na-ejighị n'aka.
Dị ka ekwuru site na ikpo okwu a, mepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị site na Facebook Stores ọ bụ usoro dị oke ọsọ ma dịkwa mfe Site na ndebiri na ngwa ọrụ dị iche iche ha tinyere n'aka anyị, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere onyonyo nke ngwaahịa anyị niile, anyị nwere ike ịnwe ụlọ ahịa nke anyị na nkeji ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Otu esi belata mmetụta nke coronavirus na ụlọ ọrụ
Huawei Y6P: Anyị na-enyocha "ọnụ ala" kachasị ọhụrụ site na Huawei
Yeedi 2 ngwakọ, in-omimi analysis of a smart robot agụụ Cleaner